အနုပညာရှင်တွေကို ဗီဇာပိတ်ပင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို လုံးဝ ထောက်ခံတယ်။ နအဖဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာဆိုကျပါစို့ . . ပဲခူးမှာ စစ်သားတွေ လူသတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဒီမိုတွေက အားကျိုးမာန်တက် ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့ . . စစ်တပ်ထဲမှာ အရပ်သားတွေနဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်အောင် နေထိုင်ဖို့ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ နအဖ တော်လှန်ရေး ရပ်တန့်သွားခဲ့ရင် စစ်တပ်က ပြည်သူတွေအပေါ် မတရားသတ်ဖြတ်တာတွေ ပိုမိုပြီး တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် နအဖဟာ လူအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်စပါယ် မချိုးဖေါက်ရဲတာ ဒီမိုတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ နအဖ ဆန့်ကျင်ရေးဟာ အသက်ငွေ့ငွေ့လေးပဲကျန်ပါတော့တယ်။ ကျုပ်တို့အနေနဲ့ ဒီမိုတွေကို ဝေဖန်နေတာနည်းနည်းတော့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ပါးစပ်ထဲရှိတိုင်း စွတ်ပြောနေမယ်ဆိုရင် တကယ်လုပ်နေတဲ့ ဒီမိုတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး နအဖဆန့်ကျင်ရေးလဲ လုံးဝကို ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုတွေကို မဝေဖန်ခင် နှစ်ခါစဉ်းစားပါလို့ သတိပေးပါရစေ။
တချို့က အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူတို့လို လူတွေလဲ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာပဲ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ကိုပဲ အပြစ်ပေးတာ မတရားဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီမှာ အဓိက စဉ်းစားဖို့က ဒီမိုတွေဟာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းဟာ အရမ်းကို အကန့်အသတ် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူအားလုံးအပေါ် တန်းတူ တရားမျှတစွာ လုပ်ဖို့ဆိုတာ အစိုးရတွေပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ ဒီမိုတွေက အဖွဲ့သေးလေးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူအားလုံးကို တပြေးညီ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလုပ်ရပ်ဟာ နအဖခိုင်းသမျှ လုပ်နေသူတွေကို စံနမူနာအဖြစ် ပညာပေးတဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ . . . ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခြင်း မခံရပါဘူး။ သူတို့အဖွဲ့ အမေရိကန်ကို သွားခွင့် ပိတ်ခံရတဲ့ အတွက် ဘ၀ပျက်သွားမှာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက်သွားတာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့အဖွဲ့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားကြပါ။ ဖာသည်မတပည့် စစ်ဗိုလ်တွေက ဒီလုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်နေတာလဲ မတရားတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ယူဆပြီး ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားကြပါ။ ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် အဓိက ထိခိုက်သွားတာ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တစုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဖာသည်မတပည့် စစ်ဗိုလ်တွေက ဒီလုပ်ကို ဆန့်ကျင်နေတာလဲ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်စုရဲ့ အကျိုးကို ထိခိုက်လို့ ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မတရားဘူးဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ ဒီမိုတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မဆန့်ကျင်ပါနဲ့။
နောက်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေဟာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရအောင် အခွင့်အရေးကို မျှော်ပြီး လုပ်နေသူတွေလို့ စွပ်စွဲထားထားတာလဲ ရှိပါတယ်။ ဘာအတွက် သူတို့ကို အပြစ်တင်ရတာလဲ။ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို လာဖို့အတွက် ငွေအများကြီး ကုန်ကျခံရပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် အိမ်တွေ ၊ ကားတွေ ရောင်းပြီးမှ လာကြရတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာ အဆင်မပြေလို့ စွန့်စားပြီး ထွက်လာရတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့တွေ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရအောင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ကို မထိခိုက်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရခဲ့ရင် သူတို့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုး မောင်နှမတွေကို ကူညီထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းကို အကျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ ဆန္ဒပြတဲ့ လုပ်ရပ်ကို . . . စောက်တင်းပြောပြီး စောက်ပြစ်တင်စရာ အကြောင်းလုံးဝ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အနုပညာရှင်တွေကို ဗီဇာပိတ်ဖို့လုပ်တဲ့သူတွေ၊ ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ အားလုံးကို လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ အားလဲပေးပါတယ်။ အလေးလဲပြုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
( မှတ်ချက်။ ။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းအလိုမရှိဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းမှာ သူ့ကို သပိတ်မှောက်ဖို့ စည်းရုံးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အနုပညာရှင်တွေလဲ ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရတာကို နားလည်ပါတယ် )
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:35 AM
ကိုဇော်မျိုးကိုထောက်ခံတယ်ဗျာ။ 100% အပြည့်ဘဲ။ မွတ်စလင်တွေအကြောင်း သိရှိအောင် ဖေါ်ပြပေးတာတွေ မသိသေးတာတွေသိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်
htaut khan yone nae. arr ma ya yin phin par khan kwar..
khway naut lite lote yin khway pae phyit mhar pae'
zaw myo so tae. kg thu myar country mhar nay tar 12 kyaw b..
khu hti khway lo haung nay tone..
မင်းပေးလိုက်တဲ့ ကွန်မန့်က အရမ်းမိုက်တယ်ကွာ
မင်းတို့လို ဆဲဖို့လောက်ပဲတတ်တဲ့ ဒီမိုတွေကြောင့်မို့ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး မအောင်မြင်သေးတာ မဆန်းပါဘူး
အိုလံပစ်ဆိုတာ ခွေးကုလား အလ္လီး ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ကောင်ကိုး
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကျွန်ကုလား Olympic
မင်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ကောင်က သူ့ကို ကျွေးမွေးပြုစုလာတဲ့ . . . သူ့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ . . . သူ့အဖိုးနဲ့ ဦးလေးကို လပေါင်းများစွာဆဲခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးကန်းပြီး ဆဲတဲ့ စကားတွေကို ဂုဏ်ယူပြီး Quran ကျမ်းထဲမှာ ထည့်ရေးထားတယ်။ ဒီတော့ တမန်တော် မိုဟာမက်ဆိုတာ ချေးစားတဲ့ ခွေးလောက်တောင် အဆင့်အတန်းမရှိ။ ကျေးဇူးတရားမသိတဲ့ မိုဟာမက်ကို ကိုးကွယ်တဲ့မင်းတို့က ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ကုလားတွေက သူများအိမ်မှာ ခိုကပ်နေပြီး အိမ်ရှင်တွေကို စော်ကားတဲ့ လုပ်ရပ်ကို တကမ္ဘာလုံးက သိနေပါပြီ။ မြန်မာတွေရဲ့ မြေပေါ်မှာ ခိုကပ်နေပြီး မြန်မာတွေကို စော်ကားတဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ စကားမဖွဲ့လောက်ပါဘူးကွာ။ ဒါနဲ့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ကုလားအဖွဲ့တွေကို ဒီမိုကုလားတွေက မဆန့်ကျင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုသမားတွေက ဒီမိုကုလားတွေကို ခွေးကုလားတွေဟု ဆဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်.
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း အလိုမရှိ ဆောင်းပါးကောင်းပါတယ် သဘာဝကျတယ်
မူရင်းမဆဲပဲ အခိုင်းခံကိုဆဲရင် မူရင်းလူက ကျေပ်နေမှာပေါ့ သူတို့ အချင်းချင်း အိုးမဲသုတ် ရန်ဖြစ်ခိုင်းထားသလို ဖြစ်သွားတယ်
၀ိုင်းစုခိုင်ဝိန်းဆိုတာ ဘယမှာ မှ စာရင်းထဲထည့်စရာမလိုပါဘူး မူစလင်တွေ လူပါးဝနေတာတော့ မြန်မာတွေ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရမယ် မူဆလင် ညစ်စုတ်ပုံတွေရေးပါအုန်း မြန်မာလူမျို တစ်ယောက်ဖတ်ရရင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အများကြီးစည်းရုံးနိုင်ပါတယ်
၇ှင်ကိုးကွယ်တာကဒေဝဒတ်ဖြစ်လိမ်.မယ်နော် ဘုန်းကြီးကျောင်းေ၇ာေ၇ာက်ဖူး၇ဲ.လား သံယာတော်တွေကိုဖမ်းတုန်းကေ၇ာက်ဖူးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်တည်းက ၇ှင်.မိဘနဲ.ေ၇ာက်ဖူးခဲ.၇ဲ.လား
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှမျိုးချစ် မျိုးချစ်စစ် လူငယ်တစု
ဆ၇ာကြီးဇော်မျိုး :ဟေ. ငါလာတာနဲ.ကုလားတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြီလား
ေ၇ွဂျူး :you came right time(အင်္ဂလိပ်စာမှားနေပါသည်)ဆ၇ာကြီးကိုကျွန်တော်အ၇မ်းအားကိုးပါတယ်ဆ၇ာကြီး၇ယ် ဆ၇ာကြီးကအ၇မ်းတော်တော. မြန်မာပြည်နဲ.တောင်မတန်ပါဘူးအီ
ဇော်မျိုး :မင်းကလဲကွာငါ.ကိုအဲ.လောက်မမြောက်ပါနဲ.မင်းလဲ တာဝန်တွေခွဲဝေယူနေတာပဲုနောက်တော.လဲငါ.လိုဖြစ်လာမှာပေါ.
ေ၇ွှဂျူး :ဆ၇ာကြီး၇ဲ.ကျန်းမာေ၇းကိုဂ၇ူစိုက်သလို လုံခြုံေ၇းကိုဂ၇ုစ်ိုက်နော်
ဇော်မျိူး :စိတ်မပူပါနဲ.ကွာ အိမ်သာတည်းမှာနေ၇င်းချီးကားတိုက်သွား၇င်တော.မတတ်နိုင်ဘူးပေါ.ဒါပေမဲ.ငါက ၄ယောက်လောက်တော.အသာလေးပါ ငါငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းပြေးပြီး ငါ.သူငယ်ချင်းအပေအတေ ဂျလေပီတွေနဲ.၇န်ဖြစ်နေကြပါကွာ
ဇော်မျိုး :ဟ မနိုင်၇င် ထိုင်၇ှိခိုးမှာပေါ.ငါ ငယ်ငယ် ကျောင်းပြေးစဉ်တည်းကလုပ်နေကြပါကွာ ဒါမှမ၇၇င် ဖင်လန်ပြေး၇ုံပေါ.
ေ၇ွဂျူး :သူ၇ဲကောင်းဆန်လိုက်တဲ.ဆ၇ာကြီး၇ယ် ဆ၇ာကြီးက ၀တ္တု ထဲကဆ၇ာကြီး စနေပြောင်ပြောင်ကြနေတာပဲ
ဇော်မျိုး :စကားပြောလို.တော. ကောင်းတယ်ကွာ ငါ.၇ည်းစားလေးဆီဖုန်းဆက်၇မယ် ၇ည်းစားကိုတော.ကြောက်၇တယ် သူကငွေ၇ှာကောင်းတယ်
ေ၇ွဂျူး :အားကျလိုက်တာ ဆ၇ာကြီး၇ယ် ဒါနဲ.ဆ၇ာကြီး၇ည်းစားကဘယ်မှာလဲ
ဇော်မျိုး :တ၇ုတ်နယ်စပ်ကကုမ္မဏီမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ကွ ကုမ္မဏီနာမည်က ဇိမ်ခန်း ကုမ္မဏီကွ လူ၎ ၅ ယောက်လောက်၇၇င်ထောပြီ တပ်စုတ်ကြီး၇ဲ.သမီး သန္တာေ၇ွတောင် အဲ.အလုပ်လုပ်ချင်လို.ငါ.ကိုကပ်နေတာကွ
ဇော်မျိုး :အေး ကိုယ်.ဟာကိုေ၇း ကိုယ်.ဟာကိုထောက်ခံ ဟိုကခိုး ဒီကလစ်ပေါ.ကွာ ငယ်ငယ်ကထမိန်စုတ်လည်ခိုး၇င်းတတ်လာတဲ.ပညာပေါ.ကွာ ဘ၀နဲ.၇င်းလာ၇တာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး
ေ၇ွဂျူး :မှတ်သားလောက်ပါတယ် ဆ၇ာကြီး၇ယ်
အနှစ်​သာရ မရှိတာ​တွေ မ​ရေးကြ